नयाँ स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् रियलमीका उपयुक्त ५ मोडल - Tech News Nepal Tech News Nepal
आईतवार, बैशाख १९, २०७८ १७:०३
नयाँ स्मार्टफोन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् रियलमीका उपयुक्त ५ मोडल
काठमाडाैं । नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने बजारमा तपाईंका लागि धेरै विकल्प छन् । यसअन्तर्गत रियलमीका स्मार्टफाेन विभिन्न सिरिज र मूल्यमा उपलब्ध छन् ।
नम्बर सिरिजदेखि सी सिरिजसम्मको यात्राका दौरानमा इन्ट्री लेभलका स्मार्टफोनदेखि मिडरेञ्ज उपकरणहरुको उत्पादन कम्पनीले गर्दै आएको छ ।
‘उन्नतिदेखि चुनौतीसम्म’ को मूल एजेण्डासहित मोबाइल फोनको क्षेत्रमा बजार विस्तार गरिरहेकाे रियलमी प्रयोगकर्ताका लागि वैकल्पिक ब्राण्ड बन्न सक्छ । र, याे ब्राण्डका फाेन किन्ने साेचमा हुनुहुन्छ भने यी स्मार्टफोन माेडल उत्तम हुन सक्छन् :
रियलमी सेभेन सिरिज (रियलमी सेभेन र सेभेन आई)
रियलमी सेभेन र सेभेन आई दुवै स्मार्टफोनलाई बजारमा रुचाइएकाे छ । कम्पनीका अनुसार बेस्ट सेलरका रुपमा यसका हजारौं मोबाइल सेट बिक्री भएका छन् र प्रयोगकर्ताले राम्रै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
रियलमीका यी फोन ८ जीबी र्‍याम, १२८ जीबी फोन मेमोरी र शक्तिशाली ब्याट्री प्रदर्शनका साथ उपलब्ध छन् । यसैगरी यीनमा तीव्र चार्जिङ प्रविधि पनि छ, जसकारण केबल २६ मिनेटमा ५० प्रतिशत चार्ज गर्न सम्भव छ, जुन एकदमै उपयोगी छ रहेकाे कम्पनीकाे दाबी छ ।
यसको प्रदर्शन अर्को उत्कृष्ट पक्ष हो, जसले प्रयोगका क्रममा आनन्ददायी अनुभूति दिन्छ, हेलियो जी ९५ चिपसेटद्वारा सञ्चालित यो फोन उत्कृष्ट प्रदर्शनीका साथ फोन बिक्री हुनेमा सातौँ बेस्ट सेलर फोन हो ।
क्यामेरा अर्को पक्ष हो, जसले यस सिरिजको श्रृङ्खलामा रियलमीलाइ उत्कृष्ट बनाएको छ । यसमा प्रयोग भएको ६४ एमपी सेन्सर क्यामेराले फराकिलो कोणका साथ सर्वश्रेष्ठ तस्वीर खिच्ने कम्पनीकाे दाबी छ ।
यसमा रहेको स्टेरी मोड रातिको समयमा ताराहरुले भरिएको आकाशको सुन्दर तस्वीर निकाल्छ, जुन एस्ट्रो फोटोग्राफी अल्गारिदमद्वारा सञ्चालित छ ।
रियलमी सेभेनको मूल्य ३५ हजार ९९० र रियलमी सेभेन आईको मूल्य २९ हजार ९९० रहेको छ ।
रियलमी सी सिरिज (सी ११, सी १२, सी १५०
सी सिरिजको उत्पादनदेखि रियमीले सधैं प्रवेशस्तरको स्मार्टफोन सेग्मेन्टमा अतिरिक्त फिचर थप्दै आएको छ । नेपालमा उपलब्ध सी सिरिजका सी ११, सी १२ र सी १५ गरी तीनवटै स्मार्टफोन गेमिङ क्षमताका लागि उत्कृष्ट हेलियो जी ३५ चिसपेटद्वारा सञ्चालित छन् ।
अनलाइन कक्षादेखि अनलाइन गेम प्रयोजनका लागि यी मोबाइल फोन उत्कृष्ट छन् । रियलमीका तीन सिरिज ६.५ इन्च मिनी ड्रप पूर्ण स्क्रिन डिस्प्लेमा उपलब्ध छन् ।
५ हजार एमएएचकाे ठूलो ब्याट्रीका साथ रियलमी सी ११, ६ हजार एमएच ब्याट्रीका साथ सी ११ र तीव्र चार्जिङ क्षमताका साथ ६ हजार एम एच् ब्याट्रीकै साथ सी १५ सिरिजका फोन उपलब्ध छन् ।
उत्कृष्ट क्यामेराको खोजी गर्नेका लागि यी फोन उपयुक्त हुनसक्छ । सी ११ मा एआई डुअल क्यामेरा, सी १२ मा एआई लेन्स सेटअपसहितको ट्रिपल क्यामेरा र सी १५ मा एआई असीमित आनन्दका साथ चार वटा एआई क्यामेरा राखिएको छ ।
यी तीनवटै मोबाइलमा नाइट स्केप मोड रहेको छ, जसले रातमा खिचिएका फोटो र भिडियोलाई सुन्दर बनाउने तर्क कम्पनीकाे छ । तीनवटै फोन एआई फ्रन्ट क्यामेरा, डुअल सीम कार्ड र मेमोरी कार्डका लागि ट्रिपल कार्ड स्लट, वाटरप्रुफ तथा ज्यामेटिय ग्रेडियन्ट डिजाइनमा निर्माण गरिएका छन् ।
रियलमी सी १२ र सी १५ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरका साथ उपलब्ध रहेकोमा सी ११ फेस अनलकसहित उपलब्ध छन् ।
२ जीबी र्‍याम र ३२ जीबी स्टोरेजसहित सी ११ फोन १४ हजार ९९० रूपैयाँमा, ३ जीबी र्‍याम र ३२ जीबी स्टोरेजसहित सी १२ फोन १६ हजार ९९० रूपैयाँमा र ४ जीबी र्‍याम र ६४ जीबी स्टोरेजसहित सी १५ फोन १८ हजार ५९० रूपैयाँमा उपलब्ध छ ।
काठमाडौं । गुगल प्ले स्टोरमा नेपाली ईकमर्स कम्पनी ग्यापुको मोबाइल एपको डाउनलोडले एक लाखको आँकडा
१२ जीबी र्‍यामसहित नेपाली बजारमा वानप्लस ९ सार्वजनिक, कति होला मूल्य ?
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा वानप्लस ९ सार्वजनिक भएकाे छ । एन्ड्रोइड ११ मा आधारित अक्सिजन
नेपाली बजारमा साओमीको बहुप्रतिक्षित ‘मि ब्याण्ड सिक्स’ सार्वजनिक हुँदै, यस्ता छन् फिचर
काठमाडौं । साओमीले आफ्नो ‘मि ब्याण्ड सिक्स’ अर्को हप्ता नेपालमा सार्वजनिक गर्दै छ । मि
नेपाली बजारमा शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै रेड्मी नोट १० प्रो, कति होला मूल्य ?
काठमाडाैं । साओमीको बहुप्रतिक्षित मिड रेन्ज फोन ‘रेड्मी नोट १० प्रो’ शुक्रबार नेपाली बजारमा सार्वजनिक